Ungawusebenzisa kanjani umshini wokufaka umoya we-transformer coil ngokufanele?
ngu admin ku 20-07-24
Umshini wokufaka umoya we-Transformer uwumshini obaluleke kakhulu womkhiqizo ekukhiqizweni kwe-transformer. Ukusebenza kwayo kokugquma kunquma izici zikagesi ze-transformer nokuthi ngabe ikhoyili enhle. Njengamanje, kunezinhlobo ezintathu zomshini okhipha umoya wokudluliselwa ...
ngu admin ku 20-07-16
I-Silicone ingene ezimpilweni zethu ngezindlela ezihlukile. Zisetshenziselwa izindwangu zemfashini nezimboni. Njengama-elastomers kanye namarubber asetshenziselwa izinto zokunamathisela, ama-bonding agents, amakhethini endwangu, ukuhlanganiswa kweleyisi nabathungi bezithunga. Ngenkathi uketshezi kanye nama-emulsions kusetshenziselwa izindwangu zokuqothula izindwangu, izithako zokugcoba i-fiber kanye ne-p ...
i-resin-modified silicone fluid
i-resin-modified silicone fluid, njengohlobo olusha lwendwangu ethambile, ihlanganisa impahla ye-resin ne-organosilicon ukwenza indwangu ithambe futhi ifakwe umbhalo. I-Polyurethane, eyaziwa nangokuthi yi-resin. Ngoba inenombolo enkulu ye-ureido esebenza kahle kakhulu nama-Amine-format esters, inganqamula isixhumanisi ukwenza amafilimu ...
Umbiko wethu wakamuva wokuhlolwa kwe-D4 uhambisana nesitatimende sakamuva
Umbiko wethu wakamuva wokuhlolwa kwe-D4 uhambisana nesitatimende sakamuva sokulanda
Ukufinyelela kumthethonqubo kunezela i-D4 ntho ekhawulelwe ekuhlanzeni izimonyo, i-D5, esebenzayo ngoJanuwari 31, 2018
- I-D4 (Octamethylcyclotetrasiloxane) D4 - D5 (Decamethylcyclopentasiloxane) D5 - D6 (Dodecamethylcyclohexasiloxane) D6 Ukuvinjelwa kwe-D4 ne-D5 Emikhiqizweni Yokunakekela Okomuntu uqobo: Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) futhi i-Dexx descedx i-Dexxedised.